ग्यासको नयाँ सिलिन्डर किन्दा अनिवार्य रसिद – bampijhyala.com
Home > समाचार > वित्तिय > ग्यासको नयाँ सिलिन्डर किन्दा अनिवार्य रसिद
२६ आश्विन २०७७, सोमबार १७:१० bampijhyala
२६ असोज, बाँपीझ्याला, काठमाडौं । अव देखि नयाँ ग्याससहितको सिलिन्डर किन्दा डिलरबाट अनिवार्य रुपमा रसिद लिन उपभोक्तालाई नेपाल ग्यास उत्पादक संघले आग्रह गरेको छ ।
सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले रसिद बिनाको सिलिन्डर नलिन आग्रह गरेको हो । यसअघि बागमती प्रदेशमा मात्रै तोकिएको सिलिन्डरको धरौटी मूल्य बुधबारदेखि दुर्गम जिल्लाबाहेक देशभर कार्यान्वयनमा आउने विभागले संघले जनाएको छ ।
यसअघि नै सिलिन्डर लिई सकेका उपभोक्ताले भने आफूले ग्यास किनिरहेको डिलरमा गएर रसिद लिन सक्ने संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले बताए ।
नेसन्स लिगमा नर्वको जित
तामाकोशी गाउँपालीकामा कोरोना संक्रमण तिब्र, आज बेलुका ५ बजे देखि ८ गते बेलुका ५ बजेसम्म शहरे शिल २६ आश्विन २०७७, सोमबार १७:१०
सम्झनामा जेठ ३ २६ आश्विन २०७७, सोमबार १७:१०
शरीरमा अक्सिजनको कमी हुँदा किन घोप्टो परेर सत्नुपर्छ ? २६ आश्विन २०७७, सोमबार १७:१०
माओवादी केन्द्र कस्तो बनाउने ? प्रचण्डले मागे सुझाव २६ आश्विन २०७७, सोमबार १७:१०
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक २६ आश्विन २०७७, सोमबार १७:१०